Trello: lesona hifehezana ny fitaovana toy ny manam-pahaizana | Famoronana an-tserasera
Na manana orinasa hitadiavana olona maromaro hitantanana ianao; Na amin'ny fiainanao manokana fotsiny dia mila mitandrina olana maromaro isan'andro ianao, Trello mety ho fitaovana tadiavinao. Izy io dia iray amin'ireo malaza indrindra, ary mihatra amin'ny fiainana matihanina sy manokana. Te hampiasa azy ianao, fantatr'izy ireo ny mety ananany, fa raha vaovao ianao, angamba ny fananana fampianarana avy any Trello no fomba tsara indrindra hiatrehana ity fitaovana ity amin'ny fotoana voalohany.
Ary, raha mbola tsy nanandrana azy ianao dia mety ho hitanao fa somary manahirana ihany, saingy ho hitanao fa mora kokoa noho ny nieritreretanao azy io ary azonao atao ny mandamina saika ny zavatra rehetra. Mora ampiasaina izy io, mandamina tokoa ary hanatsara ny vokatrao. Mazava ho azy, izany raha vitanao ny tutorial trello avelanay manaraka ianao (ao anatin'izany ny tetika sasany).
1 Inona ilay Trello
2 Trello: fampianarana fototra hahafantarana ny fomba fiasany
2.1 Trello tutorial: Mamorona tabilao
2.2 Trello Tutorial: Mamorona Cards Board
3.1 Lazao ny ekipa
3.2 Amboary ny lohateny sy ny famaritana ny karatra
3.3 Mamorona karatra maromaro indray mandeha
Inona ilay Trello
Fa alohan'ny hidirantsika ao amin'ny fitaovana Trello sy ny lesona fampianarany dia tokony ho fantatrao tsara hoe inona izany Trello izany. A fampiharana amin'ny Internet hitantanana tetikasa. Raha ny tena izy dia tsy tetik'asa fotsiny izy ireo, fa mety ho toy ny tabilao hanoratanao izay tokony hataonao (miandry), izay eo am-panaovana azy, vita ... amin'ny fomba hahafahanao manana karazana. ny fandaharam-potoana izay ilazan'izy ireo aminao ny zavatra tokony hataonao. ataovy izany andro, herinandro na volana izany ary jereo ny fivoarana rehefa mandeha ny lohahevitra.
Ankoatry ny rindranasa an-tranonkala dia azonao atao ihany koa ny mahita azy ho fampiharana ho an'ny findainao (Android na iPhone) amin'ny fomba tsy tokony hiankinanao amin'ny tranokala hampiasa azy io, fa azonao atao ny manova azy amin'ny findainao ( ary ho hita eo amin'ny tranonkala rehetra mitovy).
Ary inona izany? Eny, ny fitantanana tetik'asa isam-batan'olona (manokana na matihanina), ary koa tetik'asa vondrona (mandrindra ekipa olona ohatra). Miorina amin'ny rafitra "karatra" izy io. Ny tsirairay amin'izy ireo dia manana andiana fampahalalana momba izay tokony hatao ary ireo dia mihetsika manomboka eo am-piandrasana ka hahavita hahita ny zavatra rehetra atao mandritra ny andro, herinandro na volana.
Amin'ny fampiasana azy miaraka amina vondrona iray, ny zava-misy afaka mamela hevitra, hevitra sns. mamela ny fandrindrana tsara kokoa satria tsy mifandray amin'ny olona fotsiny ianao, fa hitanao ny fomba fiasan'izy ireo isan'andro amin'ny fanatanterahana ireo karatra (asa) nankinina taminy)
Trello: fampianarana fototra hahafantarana ny fomba fiasany
Vantany vao misoratra anarana amin'ny Trello ianao (miaraka amin'ny mailaka sy teny miafina) dia azonao atao izany ampidino ny fampiharana ary ampidiro miaraka amin'ireo angona ireo (raha te hitondra izany amin'ny findainao ianao). Raha aleonao manao ny zava-drehetra amin'ny alàlan'ny solosaina dia tsy hiditra amin'ny pejy fotsiny ianao vao hitantana azy io.
Izao, izao azonao atao izao:
Trello tutorial: Mamorona tabilao
Ity no zavatra voalohany tokony hataonao satria ny solaitrabe dia toy ny takelaka ny fandaharam-potoanao izay hanoratanao izay rehetra tokony hataonao. Ohatra, alao sary an-tsaina hoe Alatsinainy izao, ary manana zavatra be dia be hatao amin'io andro io ianao. Azonao atao ny mamorona tabilao antsoina hoe "Alatsinainy" ary aiza no hanampianao tsanganana (ary eo no hanoratanao izay rehetra tokony hataonao amin'ny antsoina hoe karatra. Safidy iray hafa ny famoronana tabilao miorina amin'ny olona mandrindra, na ireo tetik'asa tanterahinao any am-piasana.
Mamorona dashboard, Manolotra safidy hafa aminao i Trello. Amin'ny maha-vao manomboka anao dia mamporisika anao izahay hampiasa ny tabilao kanban fototra, izay tsy misy afa-tsy tsanganana telo: miandry (satria zavatra tokony hatao izy ireo), eo am-panaovana (izay manomboka hataonao) ary vita (izay efa vitanao)
Ankehitriny, tsy mijanona eo i Trello, misy tutorial manam-pahaizana izay ahafahanao manampy tsanganana arak'izay ilainao. Mazava ho azy, ireo karatra, izay toerana apetraka ny mombamomba ny zavatra azo atao, dia tsy hanjavona, ny vita dia ampitaina amin'ny tsanganana iray mankany amin'ny iray hafa izy ireo saingy ho hita eo izany mba hahafantaranao izay vita. ary izay sisa.
Trello Tutorial: Mamorona Cards Board
Ankehitriny rehefa noforoninao ny tabilao (ary teny an-dalana, dia afaka mamorona takelaka maro araka izay ilainao ianao), manaraka dia mila mamorona ireo karatra ianao. Anisan'izany ny zavatra tsy maintsy ataonao. Ohatra, alao sary an-tsaina hoe namorona tabilao ianao handrindrana ny asan'ny olona iray.
Ny karatra dia mety ho lahasa tokony hataon'ny olona mandritra ny herinandro, ohatra, ny famolavolana drafitra marketing ho an'ny Facebook. Ity karatra ity dia hapetraka ao amin'ny tsanganana miandry ary mety hahatafiditra, mampiditra, antontan-taratasy, toy ny base pdf, na antontan-taratasy miaraka amin'ny angona ilainao hanomanana ny asa.
Zava-dehibe ny fizaranao ny solaitrabe amin'io olona io hahafahanao miara-miasa amin'izy ireo (raha tsy izany dia tsy ho hitan'izy ireo izany). Amin'ity fomba ity, rehefa manomboka miasa amin'ny tetikasa ianao dia azonao atao ny mamadika ilay karatra ho "eo am-panaovana". Ary vita indray mandeha, mankany amin'ny tsanganana vita.
Fa afaka manampy tsanganana maro kokoa ianao ho "famerenana", na "fahavitana".
Trello dia tsy manana mistery firy. Ianao dia afaka mamorona ny takelaka tadiavinao, ireo karatra ilainao, manasa olona betsaka araka izay tadiavinao ary manendre asa tsirairay avy. Ho fanampin'izany, mamela anao, isaky ny asa, hametraka vanim-potoana iray izay tsy maintsy anaovana azy (amin'ny kalandrie) amin'ny fomba ahafantarana azy hoe iza no asa maika indrindra na ireo mbola tsy tontosa ary efa ho tapitra na lany daty. vita sahady.
Na izany aza, rehefa mampiasa ilay fitaovana ianao dia tsapanao fa tsy ny fampianarana fotsiny i Trello fa betsaka ihany koa ny tetika hanamorana ny fiainanao. Avelanay eto ny sasany amin'izy ireo.
Lazao ny ekipa
Alao an-tsaina hoe namorona ny solaitrabe ho an'ny olona iray ianao ary nanendry karatra ho an'io olona manana asa io ianao. Saingy tsy nilaza na inona na inona taminao ity iray ity. Azonao atao izany mandefa fampandrenesana an'ity amin'ny alàlan'ny famantarana eo.
Izy io dia momba ny "voalaza", satria mitranga amin'ny tambajotra sosialy. Azonao atao ny manoratra hevitra amin'ny karatra manonona an'io olona io. Mba hanaovana izany dia soraty ny famantarana eo amin'ny fambara arahana ny anaran'ilay olona (ireo litera voalohany satria hanome anao sosokevitra ianao ary tsy mila manoratra azy manontolo). Ka ho tonga amin'io olona io ihany ilay fampandrenesana.
Amboary ny lohateny sy ny famaritana ny karatra
Raha iray amin'ireo mandeha haingana be ianao dia azo atao fa rehefa mametraka ny lohateny na ny famaritana ny karatra dia diso ianao, ary mila manitsy azy ianao. Raha ny mahazatra dia tsy maintsy ataonao tsikelikely izany fa manana lakilasy roa manampy anao hanova.
Raha tsindrio ny "t" dia ho afaka hanova ny lohatenin'io karatra io ianao.
Raha tsindrio ny "e" dia ahodinao ny famaritana azy.
Mamorona karatra maromaro indray mandeha
Fa maninona no manahirana sy mandany fotoana ny famoronana karatra ho an'ny asa tsirairay tokony hataonao? Azonao atao izany mamorona lisitra feno. Avy eo, mila apetaho fotsiny izy io rehefa mamorona karatra iray ary tsindrio raha hanampy fa, fa tsy karatra fotsiny dia holazainao aminy fa, isaky ny andalana, mamorona iray, amin'ny fomba anaovany azy mandeha ho azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Trello: lesona hifehezana ny fitaovana